WARBIXIN: M/weyne Deni oo ku mashquulsan Isku shaandheyn cusub oo ku wajahan Golihiisa Wasiiradda, Yaase la hadal-hayaa?
BOOSAASO(P-TIMES) – Warar laga helayo Aqalka Madaxtooyada ee Puntland ayaa sheegaya in ay suuragal tahay in Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni uu isku shaandheyn ku sameeyo golihiisa Wasiiradda, waxaana wararkii u dambeeyey ay cadeynayaan in ay u badan tahay in saameynta ugu badan ku timaado labo kooxood oo katirsan golaha Xukuumadda, kuwaas oo markii horeba ahaa kuwa uusan raali ka aheyn magacaabidooda Deni, balse ku yimi abaal siyaasadeed oo hore.
Madaxweynaha Puntland oo kusugan Boosaaso ayaa lafilayaa in uu todobaadka dambe dib ugu laabto magaalada Garoowe, isagoo halkaas ka bilaabi doona qorshaha Isku shaandheynta, ka hor furitaanka kalfadhiga baarlamaanka ee furmaya 25-ka bisha October oo ay wax badan isku hoos-duugan yihiin.
Warsidaha Puntlandtimes ayaa ogaaday in wasiiro badan oo katirsan Xukuumadda oo qaarkood ay ka mid yihiin wasaaraddaha A-da loo yaqaano ay isku shaandheynta qaadan doonto, isla markaasna liiska ay ka bixi doonaan.
Labada kooxod ee la hadal-hayo in aysan ku soo laaban doonin xukuumadda Puntland ayaa kala ah koox ay keenen Saaxiibada Madaxweynaha Puntland eelasoo galay Ole-olihii doorashada, Xildhibaanada iyo kooxo ay soo xusheen Madaxweyne kuxigeenka iyo Gudoomiyaha baarlamaanka, oo intaasba ay saami qeybsi ku ahaayeen.
Xogtu, waxay sheegaysaa in labadan kooxoodba ay noqdeen kuwa ugu waxqabadka xun Xukuumadda oo hadda 9 bilood jirsanaysa, waxaana wararku cadeynayaan in ay suuragal tahay in saameynta ugu culus uga timaado Madaxweynaha xagga baarlamaanka oo ay qaar badan gadood siyaasadeed ku jiro waqtigan.
Haddii ay dhacdo in Madaxweynaha Puntland Siciid Deni ku dhiirado in uu talaabo ka qaado oo golihiisa ka saaro wasiiradda uusan isagu soo xulan ee ku yimi kooxeysiga siyaasadeed, dad badan ayaa rumeysan in ay taasi dhabaha u xaarayso Puntland horumar wanaagsan gaarta, laakiin walaaca la qabo ayaa ah in kooxeysiga iyo abaalgudka siyaasadeed ee masiirka dalkaba ay halis galin karto filashada Xukuumadda Deni.
Baarlamaanka ayaa furmi doona,waxaana Indhaha lagu hayaa xiisado siyaasadeed oo cabsi laga qabo in uu ku bilowdo, gaar ahaana warar badan ayaa soo baxaya oo sheegaya in ay kooxaha abaabulan ee hadda siyaasadda saameynta ku leh ay kuwajahaan gudoomiyaha baarlamaanka DhoobaDareed.